apple airpods bhatiri hupenyu bvunzo mhedzisiro: anogara kwenguva yakareba sei?
Kuru Nhau & Ongororo Apple AirPods bhatiri hupenyu bvunzo mhedzisiro: anogara kwenguva yakareba sei?
Isu tapedza mazuva mashoma apfuura tichiyedza Apple AirPods uye unogona kutoona yedu Ongororo yakazara yeApple & apos; s zvechokwadi isina waya nzeve , asi pane chimwe chinhu chakanangana neruzivo icho chinokodzera kutaurwa kwakasiyana: hupenyu hwebhatiri.
Apple yakavimbisa kuti mahedhifoni anogara kwemaawa mashanu imwe neimwe pamubhadharo mumwe chete, nenyaya yacho pachayo ichipa mamwe maawa makumi maviri nemana ekutamba, saka takashamisika: ko mahedhifoni chaiwo anorarama here nenhamba idzodzo? Mushure mezvose, isu & apos; takatoyedza vamwe vakwikwidzi senge Samsung Gear IconX uye kunyangwe isu tichida dhizaini yavo yakanyanya, isu takangowana pakati peawa neawa nemaminetsi gumi nemashanu, zvichienderana nevhoriyamu.
Apple inovimbisa maawa mashanu ehupenyu hwebhatiri uye isu takawana matanhatu!
Zvakanaka, usazvidya moyo: iyo Apple AirPods haingorarame chete kuvimbiso yavo, asi ivo vanodarika zvinotarisirwa: isu takaisa mukati kune iHeartRadio ndokutanga kutenderera tisingamire kusvikira mabhureki bhatiri afa. Chiyero chakatanga na11: 04 AM uye chakapera na5: 06 PM, iyo inoshanda kusvika maawa matanhatu nemaminetsi maviri ehupenyu hwebhatiri pane chaji imwechete. Zvinoshamisa!
Chakatifadza hachisi chokwadi ndechekuti iwe unongodzosera maAirPod mune yavo mazino floss-senge kesi uye ivo vanobhadharwa zvizere kubva ku0 kusvika 100% mumaminitsi makumi maviri chete. Mukuenzanisa, iwo mamwe maGear IconX & apos; ayo isu takaedzwa akatora akareba kwenguva refu kweawa imwe nemaminitsi gumi kuti vabhadharwe zvizere.
Uyu mutambo wakashandisirwa maelebuds asina waya: chokwadi, vanhu vazhinji havafarire dhizaini yeAirPod nemazano anobuda munzeve dzako, uye zvakanyanya kukosha, vamwe vanhu havafarire kuti maAirPod haangokwani mukati nzeve dzavo, asi zvinonetsa kupokana kuti Apple yaita basa rakanaka kuita izvi zvidiki zvinhu zvekupedzisira uye zvekupedzisira.
Boka remifananidzo risiri iro.
iterate kuburikidza nemepu Java
iphone 7 foni app inotonhora
t nharembozha november 2016
Samsung Galaxy S7: Snapdragon 820 vs Exynos 8890 zvinonaka zvichienzaniswa
Hot matsva madhiri anodonhedza Samsung & apos; s Galaxy Cherechedzo 10 uye Cherechedzo 10+ munzvimbo yekutengeserana
Maitiro ekuwedzera zuva rekuzvarwa kuGoogle Calendar
T-Mobile & apos; s Web Guard inovhara nzvimbo dzakachena